အားကိုးပါရဇီ ဒို့ဝီဝီ Count on WE | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanma News » အားကိုးပါရဇီ ဒို့ဝီဝီ Count on WE	20
အားကိုးပါရဇီ ဒို့ဝီဝီ Count on WE
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 3, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 20 comments
ဝီဝီ….. ဘာလုပ်နေသလဲ…. ထွက်ပါတော့လား…………………………………………………………………….
……………………………… …………………………… ………………………… ……………………. .
……………………………….. ……………………………. ………………………………… ……………………………………..
…………………………… ……………………………………………. ……………………………….. ………………………..
. ………………………………………………. …………………………………… ………………………………. …………………………………………… ………………………….. ……………………………. ……………………………… ……………………… …………………………..
……………………….. ……………….. ……….. ……………………. ……………………….. ………………………….. …………………….. ………………………….. ……….. ဆွမ်းခံ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ရည်ညွှန်းချက်။ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ မဲပေးခွင့်ပြုရန် လွှတ်တော်အတည်ပြု
By ဒီဗွီဘီ3February 2015 ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကိုလည်း ဆန္ဒမဲ မဲပေးခွင့်ဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြု လုိုက်ပါတယ်။သမ္မတက မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီးတဲ့ နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနဲ့ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရခိုင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အဓိကထား ကန့်ကွက်ခဲ့သလို ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီကလည်း မူလက ကန့်ကွက်ထားပေမယ့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ထောက်ခံမဲများတဲ့အတွက် အခုလို အတည်ပြုခဲ့တာပါ။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုပြဌာန်းဖို့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်စဉ်ကလည်း ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် White Card ကုိုင်ဆောင်ထားသူတွေ မဲပေးခွင့်ရှိခဲ့သလို လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေတွေအရလည်း ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူတွေဟာ မဲပေးခွင့်ရှိတာကြောင့် သမ္မတရဲ့ မှတ်ချက်အတိုင်းအတည်ပြုသင့်တယ်လို့ တပ်မတော်သားတွေ က ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ရသေ့တောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမတ် ဒေါ်ခင်စောဝေကတော့ နိုင်ငံသားလို့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်သေးလို့ မစစ်ဆေးနိုင်ခင်ကာလမှာ ယာယီထုတ်ပေးထားတဲ့ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေကို တိုင်းပြည် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မပေးသင့်ကြောင်းနဲ့ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေကို ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပေးတာဟာ နိုင်ငံသားဥပဒေတွေ၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ လွှတ်တော်မှာ ပြောပါတယ်။ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်တွေကို ၁၉၅၁ ခုနှစ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ အရ ထုတ်ပေးခဲ့ရာမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်နဲ့ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ ၁ သန်းခွဲလောက်ရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၁ သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Wow says: ၀ီ က ဒါညိုးဘယ်တော့မှမလုပ် ဟိုရိုဟင်ဂျာအမတ်နဲ့တောင် ဒါ့ပုံတွဲရိုက်ထားဒါ
Ma Ma says: ၀ီဝီ ပြောတာကို ကျန်တဲ့ မဘသ ကိုယ်တော်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်လေး ကြားချင်မိတယ်။
ကိုယ်သိတဲ့ထဲက မဘသ ဘုန်းကြီးတွေလည်း အကျင့်သီလသိက္ခာ ရှိကြတာမို့ …
အခုလို အကြမ်းပတမ်းပြောတာကို ဘယ်လိုယူဆသလဲ သိချင်မိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: သမ္မတက ဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး အတန်တန်ငြင်းဆိုမှုတွေ သက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးငြင်းလာခဲ့တာ အခုတော့ သဘောပေါက်သွားပြီ၊
စောစောစီးစီး ရှိခဲ့တယ်ပြောရင် စစ်မရောက်ခင်မျှားကုန်မှာစိုးလို့ကိုး။
ခင်ဇော် says: ဒါမျိုးကျ ၉၆၉ တို့
ခြံစည်းရိုး အရိုးထိုးမဲ့ သူတွေ
မျိုးချစ်တွေ ဘာသံမှ မထွက်ပါလားး
kai says: အမေရိကားမှာတော့.. ဂရင်းကဒ်(အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်) ရထားသူတွေဟာ.. မဲပေးခွင့်မရှိ…။ ဒါဟာ.. စစ်ဒဇင်(နိုင်ငံသား)နဲ့.. အမြဲနေထိုင်သူ(ဂရင်းကဒ်)ကွာခြားချက်ကြီးတခု(သာ)ဖြစ်ပါ၏..။
အသိမမှားရင်.. ဘာသာသာသနာ့ဝန်ထမ်း(ဘုန်းကြီး) တွေကတော့.. မဲပေးခွင့်ရှိ၏..။
မြန်မာပြည်က.. ပြောင်းပြန်…။ ဆိုတော့…
ဗမာနဲ့ရခိုင်ဟာ.. ဘယ်တုံးကမှ မတည့်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုကြီး၂ခုမို့… တိုင်းပြည်ခွဲမထွက်နိုင်အောင်.. ဘင်္ဂလီတွေကို.. ကောင်တာမွေးထားသလားလို့.. တွေးရန်ရှိတာက..တခု…။
.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1982
CharTooLan says: ဒမာက လပင်းဖက်ပေါင်းနေကြဒါရယ်
ဂနေ့အစီးအဝေးဂုထိပီးတေးဝူး ရီရီတို့ဆန်းဒေးမှာ ချက်စ်ကျောင်းတက်မို့ အဲမွှားလို့
kai says: Eleven Media Group
၁။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ပေးပို့လာသော နိုင်ငံသား ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) ဖြင့် မဲပေးခွင့်ပြုခြင်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအား Eleven Media Group မှ ကန့်ကွက်အပ်ပါသည်။
၅။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ဥမကွဲသိုက်မပျက် နေလိုသော စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်ရေးအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ဤဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြန်လည်စဉ်းစားပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
naywoon ni says: ​ပြော​တော့လည်း ဆင်​ဖမ်းမယ်​ ကျားနဲ့ နဘမ်းလုံး မယ်​ မီးရထားဇလီဖားတုံး သွားကြားထိုးမယ်​နဲ့ တစ်​ကယ့်​အ​ရေးအ​ကြောင်း​ပေါ်​တော့ ဘယ်​နားသွားအိပ်​​ပျော်​​နေသီမသိ ။ ​ပြောရတာ​မောလို့ အိပ်​​ပျော်​သွားပုံရတယ်​ ။ တစ်​​ရေးနိုး​တော့ ထ​အော်​အုံး​ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4108
Foreign Resident says: တကယ်တော့ ဒီ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကလည်း မရိုးသားပါဘူး။ ၁၉၉၃ ကစ အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သုံးခေါက်ချိုးလို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နဲ့ အခြား အသိအမှတ်ပြု သက်သေခံ လက်မှတ် တစ်ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစုဆီကနေ သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ လက်မှတ်တွေကို သိမ်း၊ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစု လက်ထဲမှာ ဘာ သက်သေခံ အထောက်အထားမှ မကျန်ရစ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ- ဘင်္ဂလီတွေကို အဲလို သက်သေခံ လက်မှတ်မျိုး အများအပြား ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် ဆိုတာဟာ ယာယီ အတွက်ပဲ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အရင် စစ်အစိုးရလုပ်ခဲ့ပုံဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာတဲ့တိုင် အဲဒီ လူတွေကို စနစ်တကျ စိစစ်ပေးတာ မလုပ်ခဲ့ပဲ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားပြီး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မပေးတဲ့အပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကိုတောင် ကျူးလွန်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
စည်သူအောင်မြင့် – VOA မြန်မာပိုင်း
ဖားသက်ပြင်း says: အ​မေ ၀ီ့ကိုစိတ်​မပျက်​၀ူးလား♪ ♪
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီအစိုးရထက်​ပိုပြီး အရှက်​မရှိတဲ့အစိုးရ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ရှိ​သေးရင်​ ​ပြောပြပါလား.. သိချင်​လို့
ဦးကျောက်ခဲ says: ဝီ လား … ဝီ ဒီရက်ထဲမှာ ရာသီဥတုအေးလို့ နှာစေးနေတယ်…
ဝီ ဦးထုပ်ဆောင်းရင်လည်း အများက ကဲ့ရဲ့ကြဦးမှာလေ… ခွိ
ခင်ဇော် says: https://m.facebook.com/profile.php?id=100003265635798#!/photo.php?fbid=720878654697649&id=100003265635798&set=a.348802121905306.1073741825.100003265635798&source=48&refid=17&_ft_&__tn__=E
nicolus agral says: ဘဖောနဲ့ သဂျီးနဲ့ ဒီဘိတ်လေးလုပ်ကြပါလား (white card/Green Card/PR) မဲပေးသင့်မသင့်
(အဘဖောကို ဆဲချင်ထာ အူကိုယားနေတာပဲ ဒီရက်ပိုင်း အကုသိုလ်လုပ်တာတွေများနေလို့ နောက်အပတ်မှဆဲတော့မယ်)
kai says: ဒီမဘိတ်ပါဘူး..
သြစီနဲ့အမေရိက.. ချိန်ထိုးကြည့်ပြီးသကာလ… အမေရိကားက.. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရှိ… တကမ္ဘာလုံးကပြောင်းခိုသူတွေလည်းအသကုန်လက်ခံတာမို့..
(အမေရိကားအတိုင်း)… PR တွေမဲပေးခွင့်မရှိရေး.. ဒို့အရေး…။
မှတ်ချက်။ ။ အမေရိကဂရင်းကဒ် ကိုင်ထားသူ သည်လည်း.. တချိန်ချိန်တွင်.. ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်.. အမေရိကန်အဖြစ်လျှောက်ခွင့်.. ဖြစ်ခွင့်အလိုအလျှောက်ရှိသည်။
သာမန်အားဖြင့် စောင့်ရချိန် .. ၃နှစ်မှ-၅နှစ်…။
PR တွေ စစ်ဒဇင်ဖြစ်လမ်းပေါ်လျှောက်ရရေး.. ဒို့အရေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ငဒို့ ဝီဝီ က သီချင်းတောင် ဆိုနေလိုက်သေး။
ဘာ အကြံလဲ ဆိုတာ တော့ လိုက်မမှီ တော့ဘူး။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဒီလွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြည့်ရင် ဒီလွှတ်တော်မှာ နောက်ကွယ်ကအချက်ပေးရင် တညီတညွတ်ထဲဝိုင်းအူတဲ့ကောင်တွေ ကြီးစိုးနေမှန်း အလွန်ထင်ရှားပါတယ်။ အဲဒါကို အချိန်မီလေး သတိပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်။
.တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေတိုင်းက နောက်တပတ်လွှတ်တော်မှာ တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားလဲစားမယ့်ကောင်မျိုးတွေ တစ်ယောက်မှပါမလာအောင် တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်ဖို့ အချက်ပေးသံပဲဖြစ်ပါတယ်။
.ကျုပ်တို့လူမျိုးက အွန်လိုင်းမှာသာ အသံကောင်းဟစ်တာ။
.တကယ်မဲပေးရမယ့်ရက်ကျတော့ မဲရုံသွားပြီး ကိုယ်တိုင်မဲပေးဖို့ ၀န်လေးသူတွေ အများသား…
Ma Ma says: ကိုယ့်မဲတပြားက တပြားဆိုသလို တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်မဲရုံသွားပြီး မဲပေးဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: (ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတင်ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ တစ်သန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရတာနဲ့အမျှ ဝှိုက်ကတ်ထုတ်ပေးခွင့်အာဏာရခဲ့သူတွေ ဘယ်သူတေတေငတေမာရင်ပြီးရော လူချမ်းသာရပ်ကွက်မှာ တိုက်ဟီးဟီးနဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်နေသူတွေ အကြောင်း အမြဲစဉ်းစားမိ ရင်နာမိပါတယ်)
အန်တီမမရေးသလို ကိုယ့်မဲတပြားကတန်ဖိုးရှိမယ်ဆို မဲရုံသွားဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။
ိုယ့်မဲပြားကိုတန်ဖိုးမထားပဲ ကိုယ်မဲစာရင်းပါတဲ့တာဝန်ကျရာအရပ်ကနေ ပိတ်ရက်မတိုင်ခင်ပြန်ရပြီးရော ထွေအုပ်နဲ့ညှိပြီးကြိုတင်မဲပေးခဲ့ကြသူတွေနိုင်ငံတဝှမ်း ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေလိမ့်မလဲ
အလင်းဆက် says: ဝီ့ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြပါတော့ကွယ် ငှယ် ငှယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.